Archive du 20171020
Zava-doza teny Ankadifotsy Mpianaka may kila tao an-trano
Nampivarahontsana sy nampalahelo ny zava-niseho teny Ankaditapaka-Ankadifotsy ny takarivan’ny alarobia 18 oktobra tokony ho tamin’ny 7 ora.
Fetison Andrianirina Mamboly korontana ny fitondrana
Tsy fotoanan’ny fanovana na fanovanana ny lalàmpanorenana intsony izao famaranana ny fe-potoana voalohany amin’ny Repoblika faha-4 izao, hoy i Fetison Andrianirina, Filohan’ny antoko Roso ho amin’ny Demokrasia Sosialy (RDS).
Taratasin’i Jean Jean Pesta
Miarahaba Jean a ! Miala tsiny aminao aho aloha fa anarana moa tanim-boanjo.
Sinoa zanatany sy Sinoa vao tonga Tokony havahana tsara, hoy ireo Sinoa ao Toamasina
Manoloana ny disadisa mikasika tany iray mirefy 100 ha ao Antanambao Toamasina faharoa izay hifanenjehana teratany Malagasy sy sinoa mizaka ny zom-pirenena Malagasy monina eto an-toerana dia nanazava ireo sinoa fa azy ireo ny tany.
Famoahana tsiambaratelo Voantso eny amin’ny zandary i Mahery Lanto Manandafy
Niditra tao amin’ny lapa sy niasa tao aho ary ny nifanarahana tao dia ny hanatsara endrika ny prezidansa, ary nazava tsara izany. Raha tiana ny hampandroso ity tany ity dia mila fitoniana ara-politika ara-tsosialy sy ara-politika, ny fifandimbiasam-pahefana demokratika, hoy i Mahery Lanto Mandafy nandritra ny fanehon-keviny tao amin’ny onjam-peo Top Radio 102.8 FM omaly.
Mihazakazaka mihemotra !
« Mihazakazaka mihemotra raombelona miaro ny ainy tsy ho faty, ka hanosehany ny hafa », hoy ilay mpanakanto malaza iray izay.
Vakinankaratra Nametrahana « point de contrôle sanitaire » hiadiana amin’ny pesta
Napetraka tamin'ity herinadro ity ny toerana natao hanaraha-maso ireo fiara mpitatitra olona sy ireo mpandeha miditra sy mivoaka an’Antsirabe amin’izao fotoana na ny "Point de contrôle sanitaire ", izay tonga dia miasa avy hatrany.
CROIX ROUGE INTERNATIONAL Hanampy amin’ny ady amin’ny pesta
Noraisin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier, teny Mahazoarivo omaly ny sekretera jeneralin’ny federasionan’ny Croix rouge international sy ny Croissant rouge, Elhadj As Sy.
Resaka vaksinin’ny pesta Nisahotaka i Toamasina
Nampisahotaka ny ray aman-dreny nanan-janaka madinika ao Toamasina omaly ny fipariahan’ny resaka fa misy mpitsabo mitety fokontany miaraka amin’ny miaramila ary manery ny tsy maintsy hanaovana vaksiny ny ankizy ho fiarovana amin’ny valanaretina pesta.
Antananarivo 141 no mararin’ny pesta eny amin’ny hopitaly
Tsy nisy ny olona voaporofo ara-medikaly fa voan’ny pesta tato anatin’ny 3 andro izao, izay midika fa manomboka mihena ny tratran’ity valan’aretina ity, hoy ny minisitry ny fahasalamana ny Pr Lalatiana Randriamanarivo, omaly, teny Ambohidahy.
Aretina pesta Mbola mari-drefy faharoa i Madagasikara
Anisan'ny niteraka fanontaniana teny anivon'ny fiarahamonina tato ho ato ny famaritana ny haavon'ny aretina pesta eto amintsika izay navoakan'ny sampandraharaha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS.
Antenimieram-pirenena Notolorana fitaovana fitiliana ny pesta
Nanolotra maimaimpoana fitaovana fizahana hafanana maromaro ho an’ny Antenimieram-pirenena ny minisiteran’ny fahasalamana hoentina miatrika ny fiparitahan’ny aretina pesta ankehitriny.
Fanokafana ny TIKO AAA Tsy te hahalala ny fanjakana
Nihaona tamin’ny minisitry ny indostria Tazafy Armand omaly ny filohan’ny sendikan’ny Indostria eto Madagasikara (SIM) Fredy Rajaonera.
Toby kolonely Alphonse Rakotonirainy Famindram-pahefana 3 no tontosa omaly
Tontosa omaly tetsy amin’ny toby kolonely Alphonse Rakotonirainy etsy Soanierana ny fifamindram-pahefana teo amin’ireo lehibena rezimanta miisa telo dia ny hery fiarovana ny aim-bahoaka (Corps de protéction civile) sy ny Bataillon recamp ary ny RTS na ny rezimanta fampitana andraikitra.